တိုယိုဟိခို ကာဂါဝါ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1888-07-10)ဇူလိုင် ၁၀၊ ၁၈၈၈
ဧပြီ ၂၃၊ ၁၉၆၀(1960-04-23) (အသက် ၇၁)
စစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူ ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားသူ ၊ ခရစ်ယာန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားသူ၊ အလုပ်သမား လှုပ်ရှားပြောင်းလဲရေးဝါဒီ ၊ စာရေးဆရာ
တိုယိုဟိခို ကာဂါဝါ (賀川 豊彦 ကာဂါဝါ တိုယိုဟိခို၊ ၁၀ ဇူလိုင်လ ၁၈၈၈ – ၂၃ ဧပြီလ ၁၉၆၀ ) သည် ဂျပန်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူ၊ ခရစ်ယာန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားသူ၊ အလုပ်သမား လှုပ်ရှားပြောင်းလဲရေးဝါဒီ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ အဆုံးအမများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အသုံးချရန်အတွက် စာပေများကို ရေးသားခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်းများကို လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများနှင့် ချတ်ကျောင်းများကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၃ ကျန်းမာရေးနှင့် သေဆုံးမှု
၄ Brotherhood economics
၅ Three-dimensional forestry
ကာဂါဝါကို ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ခိုဘဲမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဘနှစ်ဦးသည် ငယ်စဉ်ကပင် ဆုံးပါးခဲ့သည်။ သူသည် အမေရိကန်သာသာနာပြုဆရာနှစ်ဦးဖြစ်သည့် Drs. Harry W . Myers and Charles A. Logan တို့ထံတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ထိုဆရာနှစ်ဦးသည် သူတို့၏ အိမ်တွင် ကာဂါဝါကို ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
သူသည် အင်္ဂလိပ်စာကို ထိုဆရာများထံမှ သင်ယူခဲ့သည်။ လူငယ်ဘဝ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာကို သင်ယူပြီးချိန်တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ ကာဂါဝါသည် T okyo Presbyterian ကောလိပ်တွင် သင်ယူခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ခိုဘဲဘာသာရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံကျောင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုဘာသာရေးသိပ္ပံကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားသည့်အခါ ကာဂါဝါသည် အခြားသော နည်းပညာကို ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ကျောင်းသားများကြောင့် အခက်အခဲများနှင့် တွေ့ခဲ့ရသသည်။ သူသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အမှန်တရားများ ဖြစ်သည်ဟု ယုံယုံကြည်ကြည်ပင် ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၁၄ မှ ၁၉၁၆ အထိ သူသည် Princeton ဘာသာရေးသိပ္ပံကျောင်းတွင် ပညာသင်ခဲ့သည်။
၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင် ကာဂါဝါသည် သာသနာပြုရန်၊ အလုပ်သမားများအတွက် နှင့် ဘာသာရေးပညာရှင်များအတွက် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခိုးဘဲ၏ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် သူသည် ဆင်းရဲမှုကို တွန်းလှန်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို လေ့လာရန်အတွက် အမေရိကန်သို့ သွားခဲ့သည်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် သူသည် Resear ches in the Psycho logy of the Poor စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်သည် များစွာသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံများကို မှတ်သားထားသည့် သူ၏ အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံ၍ ရေးထားသည့် စာအုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကာဂါဝါသည် ဂျပန်တွင် ၁၉၂၁ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၂၂ ခုနှစ်များတွင် အလုပ်သမားနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများအတွက် တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သူသည် အကျဉ်းထောင်အတွင်း ရောက်ရှိသည့်အခါ စာအုပ်တစ်ခု ကို ရေးခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်မှာ Crossing The Deadline and Shooting at the Sun ဖြစ်သည်။ သူသည် ထိုစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေပြီးနောက် ကာဂါဝါသည် တိုကျိုတွင် တက်ကြွစွာဖြင့် အခြားသူများကို ကူညီမှုများ ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ခန်တိုးငလျင်တွင် ကာဂါဝါသည် ကူညီမှုများကို ပြုလပ်ပေးခဲ့သည်။
သူသည် ဂျပန်အလုပ်သမားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသားစစ်ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တို့ကို ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကာဂါဝါသည် သူ့ဘဝတွင် စာအုပ် ၁၅၀ ကျော် ရေးသားခဲ့သည်။ သူသည် စာပေဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုအတွက် ၁၉၄၇၊ ၁၉၄၈ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုအတွက် ၁၉၅၄၊ ၁၉၅၅ တွင် တင်သွင်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လ၊ အိုဆာကာတွင် ကာဂါဝါသည် နှလုံးကျန်းမာရေးမကောင်းမှုကို ခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည် အိပ်ရာပေါ်တွင် နှစ်ပတ်နေခဲ့ရသည်။ သူသည် စာပေများ၊ ဟောပြောခြင်းများ၊ အလုပ်သမားစီမံကိန်းများ စသည်တို့အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နှစ်များကြာလာသည့်အခါ ကာဂါဝါ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် တခါမတ်ဆွတ်ရှိ Saint Luke's Hospital တွင် နောက်တစ်ကြိမ် သုံးလကြာ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရသည်။ ကာဂါဝါသည် မဆွတ်ဇဝရှိ သူ၏ အိမ်တွင် အိပ်ရာပေါ်တွင်သာ အချိန်များစွာကို ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ဧပြီလလယ်တွင်သူ၏ ကျန်းမာရေးသည် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်မူ တစ်ဖန် ဆိုးရွားခဲ့သည်။ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကာဂါဝါသည် သုံးနာရီခန့် သတိမေ့မြောနေ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် နိုးလာခဲ့ပြီး သူ၏ ဇနီးနှင့် အနားတွင်ရှိသော အခြားသောသူများကို ပြုံးပြခဲ့သည်။ သူသည် နောက်ဆုံးစကားအနေဖြင့် “ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းအေးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ၊ ဂျပန်မှာ ချတ်ကျောင်း လုပ်ပါ” ဟု ပြောခဲ့သည်။
ကာဂါဝါ၏ စီးပွားရေးသီအိုရီကို Brotherhood Economics စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကာဂါဝါသည် Princeton တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားစဉ်တွင် ဂျိုးဆပ်ရာဆယ်စမစ် ရေးသားခဲ့သည့် T r ee Cr ops: A Permanent Agriculture စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ တွင် သူသည် ဂျပန်ရှိ မြေယာမပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်သမားများကို “ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းသည် မြေဆီလွှာပျက်စီးမှု ပြဿနာ၏ ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်၊ ထိုစိုက်ပျိုးထားသည့် သစ်ပင်များမှ ခူးဆွတ်၍ရသည့် သီးနှံများမှလည်း အခြားသော အကျိုးအမြတ်များရရှိနိုင်သည်၊ ဝက်များအတွက်အစာများ ရနိုင်သည်” စသည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်ပြောကြားခဲ့သည်။
↑ Axling,William.Kagawa.Harper and Brothers Publishers. New York and London. 1946.Chapter 3. p 28-41
↑ Anri Morimoto, "The Forgotten Prophet: Rediscovering Toyohiko Kagawa," Archived 2011-07-26 at the Wayback Machine. The Princeton Seminary Bulletin, Vol. 28, No.3(2007), 303.
↑ ٓ̔။ Tv-naruto.ne.jp။4March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nobel Peace Prize Nomination Database။ Nobelprize.org။2December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Schildgen, Robert, "Toyohiko Kagawa", California: Centenary Books, 1988
↑ Kagawa, Toyohiko, “Brotherhood Economics”, New York and London: Harper & Brothers, 1936.
↑ Robert Hart (1996). Forest Gardening, 41။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိုယိုဟိခို_ကာဂါဝါ&oldid=435395" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၅:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။